🥇 ▷ Xisbiga Xisbiga 2019: xogta, barnaamij bilaash ah iyo aqoon furan Konex - 08/28/2019 ✅
Xisbiga Xisbiga 2019: xogta, barnaamij bilaash ah iyo aqoon furan Konex – 08/28/2019
Daabacaadda sideedaad ee Xisbiga Warbaahinta, kulanka ugu weyn ee wax soo saarka warbaahinta ee Latin America, wuxuu ku saabsan yahay inuu ka bilowdo Magaalada Dhaqanka ee Konex. Laga bilaabo Ogosto 29 ilaa 31, in ka badan 2000 oo ganacsato ah, suxufiyiin, naqshadeeyayaal iyo barnaamijyo ka kala yimid adduunka Waxay ku kulmaan inay ka shaqeeyaan mustaqbalka mustaqbalka warbaahinta.
Inta lagu guda jiro saddexda maalmood ee waxqabadka, kaqeybgalayaashu waxay ka qeybgali karaan in ka badan 20 bandhigyo ah oo ay soo jeediyeen khuburo caalami ah; waxaana lagu tababari doonaa lataliyayaasha ugufiican ee aaladaha cusub iyo qaababka laxiriira xaga joornaalka xog aruurinta, monetization-ka, cabirada iyo kaqeybgalka, in kabadan 100 saacadood oo aqoon isweydaarsi ah.
Isku xirnaanta ayaa leh qiime aasaasi ah wada shaqeynta iyo meelaha wax wada abuurka ee #MediaParty. Sidaa daraadeed, tixgalinta wicitaanka weyn iyo baahida weyn ee adeegyada ay ficiladan abuurayaan, Shakhsiga wuxuu xoojin doonaa daboolida iyo awooda 4G iyo 4G + shabakadda teknolojiyada mobilada, iyadoo ujeedadu tahay dammaanad qaadista khibrada ugu wanaagsan ee xaalad kasta. kulanka.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee khudbadaha jeedin doona waxay noqon doonaan: Andrew Fishman ee The Intercept, James Dooley oo ka tirsan BBC News Labs, Elomar Souza oo ka tirsan Mashruuca Saxafiyiinta Facebook, Derek Willis ee ProPublica, Robin Andraca de Liberation, Andrew Losowsky ee Vox Media iyo Mashruuca Coral, Diana Iris Peredo Morales of Visoline, Steven Beatty oo ka socda WordPress, ama Gianfranco Fiorella de Bellingcat oo ka mid ah 20-ka qof ee ku hadla.
Daabacaadda 2019, Xisbiga Xisbiga wuxuu ku dari doonaa dhagaysi khibrad leh oo ka shaqeeya shirkadaha waaweyn sida The Intercept, BBC News Labs, Vox Media, ProPublica, Sawoline, Xoreyn, iyo iyadoo la kaashanayo mashaariicda sida Google News Initiative, Facebook Journalism project, Meedam Facebook. , marka lagu daro jaaliyadaha gobolka ee shabakadda ugu weyn adduunka ee suxufiyiinta iyo horumariyeyaasha sida Hacks / Hackers, Mozilla Festival iyo ICFJ.
Kaqaybgalayaasha shirku waxay awoodi doonaan inay kaqaybqaataan barnaamijka ugu weyn ee hal-abuurka warbaahinta ee Latin America, kaas oo sanadkan lagu deeqi doono US $ 10,000 mashruuca ugu fiican. Intaa waxaa dheer, iyo sidii caadada u ahayd qoraalladeeda oo dhan, Xisbiga Xisbiga wuxuu yeelan doonaa Bandhig Cadaalad ah oo lagu soo bandhigo 70 mashruuc oo hal-abuurnimo ah.
Shirku wuxuu saameyn ku leeyahay qaybaha kala duwan: suxufiyiinta, horumariyeyaasha, naqshadeeyayaasha iyo dadka u ololeeya barnaamijyada waxaa lagu tababari doonaa maskaxda ugu wanaagsan adduunka joornaaliistayaasha, kuna hawlan dhaqan iskaashi. Noocyada iyo badeecaduhu waxay fursad u heli doonaan inay khalkhal galaan, go’aanna ka gaadhaan suuqa warbaahinta si weyn u daboolsha.
Xisbiga Midoobey wuxuu ku guuleystey inuu soo saaro dareenka caalamiga ah ee awoodda uu ugu xirayo shirkadaha warbaahinta caalamiga ah horumariyeyaal hadda ka shaqeeya New York Times, Texas Tribune, MIT Media Lab, iwm. Ugu dambeynti, maal-gashadeyaasha waxay heli doonaan fursad ay ku yeeshaan xiriir hal-hal ah bilowga warbaahinta ugu wanaagsan ee Latin America. iyada oo lala kaashanayo waxqabadka Bandhig Faneedka, iyo wada-hawlgalayaasha kale.